५५ प्रतिशत कोरोना भाइरस पादबाट सरिरहेको छ भन्ने विज्ञले दिएको यस्तो तथ्यबाट दुनियाँ चकित ! « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौ । विश्वभर महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले हाम्राबीचमा धेरै कुराहरु कुराहरु ल्याएर आएको छ । यो के हो ? कसरी फैलन्छ ? रोकथाम गर्न के गर्ने ? यी अत्यन्तै महत्वपुर्ण प्रश्नहरु हुन् । किनभने मान्छेहरु आ–आफ्नै तरिकाले यी र यस्तै प्रश्नहको जवाफ दिदैंछन् । सामान्य रुपमा हेर्दा अहिले कोरोना भाइरस एक प्राकृतिक महामारी भएको बताइन्छ ।
तर यसमा सबैजना सहमत छैनन् । धेरैलाई लाग्छ कि यो त मान्छेहरुले बनाएको जैविक भाइरस हो । अहिलेसम्म हात मिलाउँदा, कसैसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा, वा थुकको छिट्टाबाट पनि कोरोनाभाइरस फैलने डर हुन्छ । कतिपयले यो भाइरस कपडा, लगायत अन्य माध्यमबाट पनि सर्छ भन्दै आएका छन् । माक्स, लगाउँने, एक्लै बस्ने र आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भन्नेजस्ता तमाम कुराहरु रहेका छन् । सायद यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपालका एकजना सांसदले महले कोरोनालाई भगाउन सकिन्छ भन्ने बयान दिनुभयो ।
यो बीचमा यो भन्दा बाहेकका कुराहरु पनि आएका छन् । सुरुवातमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि हावाबाट कोरोना फैलन सक्छ भनेको थियो । उस्ले मान्छेहरु सम्पर्कमा आउँदा कोरोना सर्छ भन्ने कुरा धेरै पछि मात्रै जानकारी दिएको थियो । अहिले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई स्थिर राख्न सहयोग गर्ने पादबाट पनि कोरोना सर्छ भन्दै केही चिकित्सक बाहिर आएका छन् । तर उनीहरुको कुरालाई विज्ञहरु प्रष्ट पार्न सक्दैनन् ।
ति डाक्टर भन्छन कि कोभिड–१९ खोक्दा, थुकका थोपा, हात मिताउँदा वा संक्रमितहरुको सम्पर्कमा आउँदा मात्रै नभएर पादबाट पनि कोरोना सर्न सक्छ । अस्ट्रेलियाका डाक्टर एन्डी ट्यागले रिपोर्ट गरे कि यस वर्षको सुरुमा कोरोनोभाइरस बिरामीहरूबाट लिइएको विभिन्न परीक्षणहरूको विश्लेषण गरेपछि उनलाई लाग्यो कि पादले गर्दा कोरोनाभाइरस हुन सक्छ ।
उनले आफ्नो अनुसन्धानलाई आधार बनाउँदै कोभिड–१९ का ५५ प्रतिशत बिरामीहरूमा पादका कारण कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको बताएका थिए । चिकित्सकले यसभन्दा पहिले फार्मलाई पादको सानो कणबाट कोभिड–१९ संक्रमण हुने भन्दै चेतावनी दिएका छन् । हामीले ग्यास निष्कासन गर्दा निस्कने ब्याक्टेरियामा कोरोना संक्रमण गराउन सक्ने क्षमता हुन्छ ।
डा. ट्यागले लेखे, ‘ठीक छ, सार्स, कोभिड–१९ लाई पादमा पाउँन सकिन्छ । १७ दिनको पोस्ट एक्सपोजरमा एसिम्प्टोमेटिक व्यक्तिमा पत्ता लगाउन सकिन्छ ।’ डाक्टरले भने कि अघिल्लो परीक्षणले देखाएको छ कि पादमा टाल्कम पावडर लामो दूरी मा स्प्रे गर्ने शक्ति हुन्छ । उनले भने, ‘सायद सार्स, कोभिड–१९ प्यारापीङ्गको शक्तिबाट फैलिन सक्छ । हामीलाई थप प्रमाण चाहिन्छ । त्यसकारण हर समयमा उपयुक्त पीपीई लगाउने कुरा सम्झनुहोस् र सुरक्षित हुनुहोस् ।’
डा. ट्यागको सुझावको बाबजुद पेसेन्टएक्सेस डटकमका क्लिनिकल निर्देशक डा. सारा जार्विसले कोरोनाभाइरस हावाबाट सर्छ भन्ने कुरामा शंका व्यक्त गरेकी छिन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि हावाबाट सर्ने कुरा अहिले आएर इन्कार गरिसकेको छ । उनले द सन अनलाइनलाई भनिन, ‘कसैलाई भाइरस संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ यदी तिनीहरू टाँसिए रहेको भागमा कुनै संक्रमित व्यक्तिले पादेर गयो ।’
उनले थप्दै्र भनिन, ‘तपाई खोकी वा हाच्छिउँ गर्नुहुन्छ, वा कडा सतहमा छुँदा तपाईको हातले मुख छोपेर खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नजिकको व्यक्तिको सम्पर्कमा भाइरस आउँन सक्छ ।’ जे होस्, डा.। जार्विसले मानिसहरूलाई शौचालयको राम्रो सरसफाई राख्न आग्रह गरेकी छन् । यसरी पनि पादमा पनि भाइरस देखिएको प्रमाण फेला पर्न सक्छ । उनले भनिन, ‘कोरोनाभाइरसको केहि रिपोर्टहरू पूमा अवस्थित छन् । खोकी र ज्वरोजस्ता अन्य लक्षणहरू प्राप्त गर्नु अघि एक वा दुई दिनमा एकपटक पखाला हुने १० जनामा ​​एक जना थिए । यसले बाथरूम सफा गर्ने सम्बन्धमा थप सावधानी अपनाउनुको महत्त्वलाई जोड दिन्छ भने यदि कसैलाई कोरोनाभाइरसका लक्षणहरू छन् भने अर्कोलाई यसरी पनि संक्रमण हुन सक्छ ।’
नबिल बैंकद्वारा सोवा हेल्थ केयर संग बिभिन्न स्वास्थ्य सेवामा बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुले छुट पाउने साझेदारी ।